Pandora anotangisa kunyorera kweApple Watch | Ndinobva mac
Makore mashoma apfuura, mazhinji aive makuru akadai seAmazon, eBay kana Google pachayo ndiani Vakamira kupa kuenderana kwemaapplication avo neApple Watch, sezvo zvaisambofungidzira chero mukana wekuwedzera kune izvo zvavakatopa kubva kunhare. Asi sezvo smartwatch yeApple yakachinja, mashandiro ayo akawedzera.
Sezvo Apple yakatanga iyo Apple Watch Series 4, mapuratifomu akawanda uye akawanda ari ivo vari kubheja zvakanyanya pairi. Mavhiki mashoma apfuura, Spotify yakatanga chirongwa chakamirirwa kwenguva refu cheApple Watch. Iye zvino ndiPandora, inotungamira yekushambadzira mimhanzi sevhisi muUnited States, uyo achangobva kusvetukira pachikwata.
Nekuvhurwa kweshanduro iyi nyowani, vese vashandisi veiyi inoverengera mimhanzi sevhisi vanogona kudzora kutamba kwemimhanzi yavo yavanofarira kubva pachiuno chavo, asi zvakare, kana tiri vanyoreri vebasa tinokwanisa zvakare kurodha nziyo zvakananga kuApple Watch yedu, kuitira ku enda unomhanya kana kuenda kunzvimbo yekurovedza muviri uchiteerera mimhanzi yedu yatinofarira pasina iyo iPhone.
Mupfungwa iyi, Pandora anga ari kumberi kweSpotify, kubva kuSweden mimhanzi yekufambisa chikuva inotungamira pasirese, zvakadaro haititenderi kurodha mimhanzi pane yedu kifaa, mashandiro ayo asingafanire kutora nguva kuti asvike.
Kunyangwe ichokwadi kuti Pandora inongowanikwa muUnited States, kambani ivo vanoda kuwedzera kune dzimwe nyika uye parizvino hapana imwe nzira irinani yekuzviita kupfuura kuburikidza neinonakidza yekuvandudza yeApple Watch, chiitiko chinodomwa nekambani kuti chichauyawo kuWear OS nekuwedzera mashandiro akafanana.
Icho chete chinodikanwa cheichi chiitiko ndechekuti uve neWatchOS 5 paApple Watch yedu, ichive chekushandisa chegumi nesere icho, kuti itipe mabasa matsva, inoda yazvino vhezheni yeWatchOS inowanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Pandora anotangisa kunyorera kweApple Watch
iTunes uye AirPlay 2 inoenderana neSamsung TV
OWC inotangisa Mercury Helios FX 650 eGPU ine Thunderbolt 3 uye inokwidziridzwa